The Bitcoin Fortune - Zvakavanzika
Yakakosha Njodzi Cherechedzo : Kutengeserana muFX neCFDs kunosanganisira njodzi yakakura yekurasikirwa nekuda kweiyo yakawedzera hunhu hwekutengesa izvo zvinogona kutungamira mukurasikirwa kwese kwemari yako uye izvo zvingave zvisina kukodzera kune ese marudzi evanoisa mari. Ndokumbira uverenge yambiro yedu yakazara yenjodzi uye mutengesi akakodzera wauchazonyoreswa naye kuti uve nechokwadi chekuti unonzwisisa njodzi dziripo usati waenderera, uchifunga nezve chiitiko chako chakakodzera. Tsvaka mazano akazvimirira kana zvakakodzera. Ruzivo rwuri muwebhusaiti ino uye magwaro ekuburitsa ndeezvakajairika chete, uye haatarise mamiriro ako pachako, mamiriro emari kana zvaunoda. Iwe unofanirwa kufunga nezve Brokerage Client Agreement nekungwarira, uye tsvaga yakazvimirira zano usati wafunga kana kutengeserana mune izvo zvigadzirwa zvakakukodzera iwe.